Indlu encinci ye-SNUGL
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguGizelle
Wamkelekile kwindlu encinci ye-SNUGL, ebekwe kwithafa lehlathi elicoliweyo phantsi kwamatye entlabathi eKandos. Wabelana ngemithwalo yeeparrothi ezimibalabala, ii-honeyaters, ii-wrens eziluhlaza kunye ne-satin bowerbirds yethu yokuhlala. Iikhangaru zidla ngokutya kusasa. Nangona ivakala isemaphandleni, i-SNUGL ikwidolophu ekufutshane ne-IGA, i-bottlo kunye nezinye izinto eziluncedo. Indlu encinci ibekwe kakuhle inedesika enkulu yamaplanga kunye nazo zonke izixhobo ozilindeleyo kubandakanya i-wi-fi, i-Baby Weber Q BBQ, indawo yokucima umlilo, kunye neTV.
Ngokwendalo indlu encinci intle kakhulu kwaye inayo yonke into oyifunayo. Kumgangatho ophakamileyo kukho ibhedi yokumkanikazi yeTempur entle enegumbi lesithathu kwisofa. Phantsi, igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo ngokumangalisayo lihlala kamnandi etyholweni kwaye kubapheki, sinekhitshi elikhulu, elimiswe kakuhle legesi elineoveni. Uya kuyithanda ibar yesidlo sakusasa yangaphakathi / yangaphandle yeNespresso okanye iti. Idesika enkulu yenza iqonga elithandekayo leyoga kwaye akunakuthintelwa ukuba uphumle emva kwemini ngeglasi yewayini ukuze uthobe ukutshona kwelanga okuqaqambileyo. Ungaphoswa kukukhanyisa indawo yokucima umlilo ngeengokuhlwa ezipholileyo, okanye ukonwabele ukungcungcuthekisa kwindawo epholileyo, efudumeleyo yoxolo kunye nokuzola.
I-Kandos yidolophu encinci enobuhlobo ekhulile ngaphaya kwelifa lemizi-mveliso kwaye ngoku iyamkela ubugcisa kunye nenkcubeko.
Ziibloko nje ezimbalwa ukuya kwiziko lelali yaseKandos apho kukho i-bric egqwesileyo yokuthenga ibrac, iigalari zobugcisa, iziko lenkcubeko laseDabee, IGA kunye neevenkile zekofu. Ukuhamba nje okufutshane, ilali yamawele eRylstone ineendawo zokutyela ezilungileyo, iikhefi, iigalari kunye nokuthenga. Kukho iiwayini ezininzi ezikufutshane ne-SNUGL, kwaye ingingqi yewayini ye-Fabulous Mudgee, egxile kwiintlobo ze-Italian kunye ne-Spanish, yimizuzu engama-45 yokuhamba. Ukuba unethamsanqa, uya kuba lapha eCementa, i-Kandos’ art biennale engamava awodwa kubugcisa bengqiqo kunye nokusebenza. Okanye kwi-visceral ezantsi emhlabeni, umboniso wonyaka we-Kandos Street Machine kunye ne-Hot Rod show iyavuyisa.
Ngentlango yaseWollemi kumnyango wakho, imisebenzi yangaphandle ebandakanya ukuhamba endle, ukukhwela ibhayisekile, igalufa kunye nokuxhuzula kulula. IGanguddy (iDunns Swamp) yindlela emfutshane yokuqhuba apho unokuqubha khona, uqeshe iphenyane okanye unyuke intaba phakathi kweendlela ezizodwa zepagoda yelitye lentlabathi. Okanye hlala usekhaya kwaye ulinganise iMount Rocky ngqo ngaphezulu kwe-SNUGL- uya kuvuzwa ngeembono ezimangalisayo zommandla. I-Henbury Golf Course itsala abadlali begalufa abavela kufutshane ne-NSW ngenxa yokusetwa kwayo okuhle kunye nokhuphiswano oluqhelekileyo. Ngaphantsi kwendlela yiCapertree Valley kunye namawa amahle entlabathi, ukuhamba kwehlathi kunye nezinye zezona ntaka zibukeleyo eOstreliya, kubandakanya i-honeyeater ye-regent esengozini.
Umbuki zindwendwe ngu- Gizelle
I'm Brazilian living in Australia for the past 20+ years, and share a passion for going to exotic places with my family and experience life the way the locals live. Recently we bought a plot of land about 3.5hrs from Sydney where we have been busy renovating the local cottage and rejuvenating the natural environment. We fell in love with the land and decided to add a tiny house where we can share our paradise with people like us.
I'm Brazilian living in Australia for the past 20+ years, and share a passion for going to exotic places with my family and experience life the way the locals live. Recently we bou…
I-SNUGL yinkonzo yobuqu, inokungena kunye neyokupaka. Izitshixo zifikelelwa ngesefu yesitshixo.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-6289-2
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kandos